ဂျေ ပီ မော်ဂန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျေ ပီ မော်ဂန်
ဂျွန် ပိုင်ယာပွန့် မော်ဂန် (၁၈၃၇ ဧပြီ ၁၇ - ၁၉၁၃ မတ် ၃၁) သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့် ဘဏ်သူဌေးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ရွှေခေတ်တွင် ဝေါလမ်းရှိ ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးရာကို လွှမ်းမိုးခဲ့သူ ဖြစ်၏။  နောင်တွင် ဂျေပီမော်ဂန် (J.P. Morgan & Co.) အမည်ရှိ လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်လာမည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းတခုကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းရှိ အမေရိကန်၏ စက်မှုလုပ်ငန်းများပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းရေးလှိုင်း၏ အဓိကတွန်းအား ဖြစ်၏။
ဝေါလမ်းမ၌ ကျင်လည်စဉ် မော်ဂန်သည် နာမည်ကြီး နိုင်ငံတကာကော်ပိုရေးရှင်းများဖြစ်သော ယူအက်စတီး၊ အင်တာနေရှင်နယ်ဟာဗက်စတာနှင့် ဂျန်နရယ်အီလက်ထရစ်သို့သော လုပ်ငန်းတို့ကို သူ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်ရောက်အောင် စီမံနိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် အခြား အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ထိန်းချုပ်ရာ ၎င်းတို့တွင် အက်တနာ (ဆေးနှင့်ဆေးဘက်အာမခံလုပ်ငန်း)၊ ဝက်စတန်းယူနီယံ (ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်း)၊ ပူးမန်း (ကားကုမ္ပဏီ) နှင့် ရထားလုပ်ငန်း ၁၂ ခုတို့ ပါဝင်သည်။  အမေရိကန်၏ဘဏ္ဍာရေးကို မိမိပိုင်ပိုင် အုပ်ကွပ်နိုင်သောကြောင့် မော်ဂန်သည် နိုင်ငံရေးမူဝါဒနှင့် ဈေးကွက်အင်အားကိုလည်း ခြယ်လှယ်နိုင်ခဲ့၏။ ၁၉၀၇ ခု၌ ဈေးကွက်လန့်မှုဖြစ်သော် ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းကာ အမေရိကန်၏ ငွေကြေးစနစ် ပြိုလဲမသွားရန် ကာကွယ်သည်။
၁၉၁၃ ခုတွင် အီတလီနိုင်ငံ၊ ရောမမြို့၌ ရောက်နေစဉ် အိပ်ပျော်ရင်း လွန်သည်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိရေးဆရာ ရွန်ချာနိုး၏ အဆိုအရ သူ့သား မော်ဂန်ငယ်ကို ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ (၂၀၁၉ ငွေတန်ဖိုးဖြင့် ၁.၂ ဘီလီယံ) မျှ ချန်ထားခဲ့ကြောင်း သိရ၏။ ထိုပမာဏကို ရော့ဖဲလာကမူ "သူဌေးတောင် မဟုတ်ဘူး" ဟု ပြောခဲ့သည်။ 
↑ "J.P. Morgan". Encyclopædia Britannica.
↑ Ward, Geoffrey C.; Burns, Ken (2014). The Roosevelts: An Intimate History. Alfred A. Knopf. p. 78. ISBN 978-0-307-70023-0.
↑ "John Pierpont Morgan and the American Corporation". Biography of America. Archived from the original on May 22, 2019.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျေ_ပီ_မော်ဂန်&oldid=709857" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။